Çetin Emeç Üst Geçit Köprüsü’nde Sona Yaklaşılıyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliinetin Emeçတံတားကြီးအဆုံးသို့ချဉ်းကပ်သည်
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အဆုံးချဉ်းကပ် cetin emecte
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်သို့အသစ်နှင့်ခေတ်သစ်ရေကူးသယ်ဆောင်ရန်ဆက်လက်နှင့်စီမံကိန်းအပေါ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကသံမဏိကိုယ်ထည်ကိုခြေထောက်ပေါ်တွင်တင်ထားသည့် inetin Emeç Overpass တံတားသစ်တွင်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်နေသည်။ သိပ္ပံဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရဓာတ်လှေကားနှင့်မျက်နှာကျက်ခင်းထုတ်လုပ်ခြင်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ချော်နိုင်သည့် TARTAN လေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်
စီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်မြေအောက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၏ရထားလမ်းထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးခဲ့သည်နှင့်မြေအောက်လမ်းပေါ်တွင်မီးတိုင်များစိုက်ထူခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်ပြုလုပ်နေသောမြေအောက်ရထားလမ်း၏ဓာတ်လှေကားနှင့်မျက်နှာစာထုတ်လုပ်မှုကိုအဓိကကိုယ်ထည်နှင့်လှေကားအခင်းများပေါ်တွင်မချော်ဘဲချည်ထားသောလေယာဉ်ပြေးလမ်းနှင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ခေတ်မီမြေအောက်လမ်းကြောင်း၏ Landscaping နှင့်လမ်းဘေးထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းသဘောပေါက်လိမ့်မည်။
ÇetinEmeç Overpass အသစ်ကို 39 မီတာရှည်လျားခဲ့သည်။ 80 သံမဏိတန်ချိန်၊ 15 တန်ချိန်အားဖြည့်သံမဏိများနှင့် 115 ကုဗမီတာကွန်ကရစ်ကို overpass ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ 33 စတုရန်းမီတာပေါင်းစပ်မျက်နှာဖုံး၊ 192 စတုရန်းမီတာဝက်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာမျက်နှာပြင်၊4လုံခြုံရေးကင်မရာ၊ 19 အလင်းရောင်လ်တာလ်တာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အ ဦး များကိုဓာတ်လှေကားနှင့်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အသစ်သောခေတ်သစ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင်ဓာတ်လှေကား ၂ ခုသည်နိုင်ငံသားများအတွက်အကျိုးပြုလိမ့်မည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည်လက်ရှိလမ်းပေါ်ရှိတံတားအသစ်ကိုမဖွင့်မချင်းတံခါးဖွင့်သည်အထိလမ်းဖွင့်ထားလိမ့်မည်။ ဒေသတွင်းနေထိုင်ပြီးÇetinEmeç Overpass ကိုမကြာခဏအသုံးပြုသောနိုင်ငံသားများသည် inetin Emeç Overpass အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းကိုကြိုဆိုကြသည်။
ÇetinEmeçမြေပေါ်ပြန်လည်ဆန်းသစ် 21 / 03 / 2019 Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာကိုခွင့်ပြုသည့်အဆင်ပြေစွာလမ်းလျှောက်သူလူသွားလာသည့်ယာဉ်များအပြင်၊ မြို့သည်လူကူးလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆက်လက်ရရှိနေသည်။ ÇetinEmeç Overpass, İzmit၏Yenidoğanခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်,
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲပြန်လည်ÇetinEmeçမြေပေါ်သည်စတင် 22 / 08 / 2019 ယာဉ်ကြောမှယာဉ်များအပြင်လမ်းလျှောက်သူများရှေ့သို့ချီတက်ရန်အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသော Kocaeli Metropolitan Municipality သည်လူကူးမျဉ်းကြားအသစ်များကိုမြို့တော်သို့သယ်ဆောင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေသည်။ inetin EmeçÜst, mitzmit Yenidoğanအိမ်နီးချင်း hoodzmit တွင်တည်ရှိသည်
Pass ကိုဖြည့်စွက်ရမည့်အဓိကကိုယ်ခန္ဓာ၏နယူးÇetinEmeçထိပ်တန်း 14 / 09 / 2019 ယာဉ်ကြောများတွင်ယာဉ်များသာမက Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်၎င်း၏လမ်းလျှောက်သူများကိုသက်သောင့်သက်သာဖြင့်လမ်းလျှောက်နိုင်စေရန်အတွက်မြို့တော်သို့အသစ်နှင့်ခေတ်သစ်လူကူးကူးစက်များကိုသယ်ဆောင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် Izmit ခရိုင်Yenidoğanခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။
3 ။ အဆိုပါ Bosphorus တံတား၏အဆုံးရောကျခါနီးပွီ 22 / 01 / 2016 Boğaz Köprüsü’nde sona yaklaşılıyor :Y apımına 2013 yılında başlanan3milyar dolar maliyetli 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinde iki kıtanın oto, ve tren yoluyla birleşmesine 391 metre…
ထိပ်တန်းနှင့်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းပြီးဆုံးချဉ်းကပ်ခဲ့သည် 16 / 05 / 2016 Üst ve Alt Geçit Projesinde Sona Yaklaşıldı :Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Emet ve Kuruçay hemzemin geçitlerine TCDD Afyon 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan taşıt üst geçit ve yaya alt…
3 ။ အဆိုပါ Bosphorus တံတား၏အဆုံးရောကျခါနီးပွီ
Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတားသတ်သွားပါပြီချဉ်းကပ်ခဲ့သည်
အဆုံးမှပိုနီးစပ်ခဲ့သည့် Sakarya Boulevard '' ၏နယူး Prjeo